Pozuelo waa ay kari weyday - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Pozuelo wuu kari waayey
Pozuelo wuu kari waayey
Xilliga Kubadda Koleyga ee Major League Soccer oo ay ka buuxaan saxiixyo sumcad leh - Xiddiga Sannadka South America, Pity Martinez! Xiddiga reer Mexico Marco Fabian ! Imaatinka Alexandru Mitrita ilaa 9,1 milyan oo doolar! Nani ! - magaca Alejandro Pozuelo ka hoos dhacay radar. Tani waxay qayb ahaan sabab u ahayd duruufaha imaatinkiisa: waxaa la shaaciyay bilowgii xilli ciyaareedka oo uusan gaari karin Toronto FC illaa usbuuca saddexaad ee ololaha 2019. Tani waxay ahayd qayb ka mid ah cabirka yar ee reer Spain, oo ay fududahay in la iska indhatiro iyada oo leh shan fuudh oo keliya iyo 7 inji dherer ahaan. Waxay qayb ahaan ahayd xamaasad la'aan ay abuurtay TFC, oo ah koox aad u kharash badan laakiin aan lahayn sheeko xiise leh oo ku soo korodhsatay xilligan cusub ee MLS.
Laakiin sideed bilood ka dib laadkii ugu horreeyay ee 2019 ee loo magacaabay ciyaartoy, Pozuelo - oo la socota Seattle Sounders Xavier Arreaga - waa ciyaaryahanka kaliya ee haray ee u tartami doona Koobka MLS Axada (15h00 HE, live ABC ) .
In kasta oo Pozuelo uu deganaa xasilloon, wuxuu lahaa saameyn degdeg ah markii ugu dambeyntii uu arkay garoonka, isagoo caawiyay ciyaartii ugu horreysay Jozy Altidore iyo in lagu dhaliyo laba gool oo ah dhibco ah 4-0. Bishii Marso 29, BMO Field waxay ku martigelisay daawadayaasha 25 447 at BMO Field. Kabtankii hore ee Genk wuxuu ka caawiyay taageerayaasha TFC inay iloobaan Sebastian Giovinco Xiddiga reer Talyaani ee u tegey Al-Hilal ee Sacuudi Carabiya ka dib waa muran dad iyo aad u muran badan oo qandaraas ku saabsan .
Isku soo wada duuboo, Pozuelo waxay tirisay 12 g Oals iyo 12 caawinta ciyaaraha 30 xilli ciyaareed caadi ah. Heerarka sareyso ma aysan aheyn wax la jeclaan karo, iyada oo yoolalka 17,3 la rajeynayay oo lagu daray kaalmooyinka la rajeynayo, laakiin weli waxay ahayd mid ku filan in lagu darajo 11e ciyaaryahanka ugu fiican MLS marka loo eego americansocceranalysis.com . Pozuelo wuxuu qeyb ka ahaa All-Star iyo Best XI sanadkan wuxuuna hada ku tartami doonaa markiisii ​​ugu horeysay ee MLS Cup, tartan uu horay ugu qaaday labo gool labo kalena caawiye ka ahaa sedex xilli ciyaareed kadib.
Waxaa la yaab leh, Pozuelo - oo Agaasimihi hore ee Swansea City, Michael Laudrup, uu mar hore isbarbardhig ku sameeyay Philippe Coutinho - Haddii uusan ku biirin TFC, wuxuu ka qeybqaadan lahaa isu soo bixii koox kale horaantii sanadka. Guga, Genk wuxuu ku jiray kaalinta koowaad ee Jupiler Pro League. Naadigu wuxuu doonayey in kabtankiisu sii joogo garoonka ciyaaraha. Pozuelo, si kastaba ha noqotee, waxay lahayd qorshayaal ah inay ugu sii gudubto Toronto.
Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee Alejandro Pozuelo ee Toronto waxaa loo caleemo saari doonaa finalka MLS Cup. Vincent Carchietta-USA TODAY Sports
Waxaan fursad u helay inaan la kulmo Cali [Curtis, Maareeyaha Guud ee FC FC] wuxuuna ii sharraxay mashruuca iyo wax walba oo uu naga filayo. Waligey kuma fikirin labo jeer, ”ayuu usheegay ESPN wareysi qaas ah kahor koobka MLS. Waxaan lahadlay xaaskeyga, waxaan mooday inay aheyd waqtigii aan guuro mana weydiisan karo waxbadan.
Marka, ka dib muddo dheer oo adag oo wareejinno ah oo la soo sheegay Athletic Pozuelo wuxuu u saxeexay sidii ciyaartoy loo magacaabay ciyaartii 4. Ma ahayn mid raqiis ah - warbixin la soo sheegay oo ah 11,3 milyan oo doolar oo lacagta wareejinta ah oo lagu daray qandaraas afar sano ah oo wadarta guud ah oo ah 18,2 milyan - laakiin way shaqaysay TFC-na waxay ku jirtaa daqiiqado 90 laga bilaabo horyaal.
Illaa iyo hadda, Pozuelo wuxuu ku raaxeysanayaa waqtigiisa horyaalka.
- Twellman: Xaqiiqda Guri-Hoyga | Lodeiro furaha
Safarka MLS Cup: Toronto | Seattle
- Farqiga ayaa loo oggolaaday 2019 | tigidhada
“Halkan MLS waxaad ka heleysaa kooxo leh sharaf badan, miisaaniyadooda iyo ciyaartoydooda, taasoo kuu ogolaaneysa inaad aragto inuu jiro tartan badan oo u dhexeeya kooxaha horyaalka,” ayuu yiri. “Waxay muujineysaa xilli ciyaareedkan markii qof walba uu filanayay finalka inuu noqdo LAFC iyo Atlanta ama New York, markaas waxaan aragnaa Toronto FC iyo Seattle. Waxaa jira sharaf badan iyo tartamo ka jira MLS oo haddii aadan aadin 100% inta lagu guda jiro ciyaar, waxaad ka adkaan kartaa koox kasta oo ka ciyaarta horyaalka. "
Waxay umuuqataa Pozuelo inay guri ka heshay Kanada iyo TFC. “Tan iyo markii aan imid magaalada Toronto, waan ogaa waxa ay kooxdu ka fileysay mana ka caban karo sababtoo ah sanadkaan wuxuu ahaa mid cajiib ah, wada jir ah iyo wada jir ah. Waxaa la ii magacaabay MLS Stars, waxaa la ii magacaabay The Newcomer of the Year, Best XI, iyo kooxdii aan gaarnay isku aadka iyo hada MLS Cup.
“Ma weydiisan karo wax intaas ka badan hadda kooxda FC FC,” ayuu yiri.
Maaha wax run ah. Wuxuu weydiin lahaa hal shay oo ugu dambeeyay: guul ay ka gaaraan koobka MLS, waxay noqon laheyd xilli ciyaareed xusuus mudan.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/toronto-fc/story/3984590/alejandro-pozuelo-couldnt-ask-for-more-from-his-debut-season-in-toronto-except-an-mls-cup-win
Sassuolo ayaa garaacay Bologna 3-1 gudaha Serie A
Weeraryahan Brugge ayaa la ganaaxay oo uu ka tagay kooxda PSG